Hacking စိတ်ကူး အပိုင်း(၁) နဂါးနီဟက်ကာအဖွဲ့ - Leet Developers AWSMyanmar DevOpsMyanmar
Hacking စိတ်ကူး အပိုင်း(၁) နဂါးနီဟက်ကာအဖွဲ့
တော်တော်ကြာခဲ့ပြီ ၂၀၁၅ လောက်ကတည်းက ကျွန်တော်သဘောကျပီး Save ထားခဲ့မိတဲ့ Post လေးတခု ပိုစ့်ပိုင်ရှင်ကို ခွင့်တောင်းပီး ပြန်တင်ပေးတာပါ။ အာ့တုန်းက ဟက်ကင်းစ ရူးခဲ့တဲ့ အချိန်ကဖတ်ခဲ့မိတာလေး ပြန်ရှဲလ်ပေးပါရစေ။မူရင်းရေးသားသူ WYTU ကိုသားလေးကိုလည်းတင်ခွင့်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ ကဲစဖတ်ကြည့်ပါတော့ နဂါးနီဟက်ကာ ဂိုဏ်းအကြောင်းလေးကို…
လူ ငယ်တချို့ကတော့ဟက်ကာများဆိုလျှင်ကြည်ညိုလေးစားကြသည် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်
ဟက်ကာတွေရဲ့အကြောင်းကိုသူတို့သိသည်။လူပြိန်းအချို့ကဆဲသည်မှလွဲ၍ ဟက်ကာရဲ့တန်ဖိုးကိုစာတွေဖတ်ခြင်းဖြင့်သိကြသည်။ နည်းပညာနှင့်ဝေးပြီး နည်းပညာပစ္စည်းများကိုသုံးသူများကတော့ ဟက်ကာဆိုသည်မှာသူခိုးလို့တွဲမြင်သည်။မကောင်းတာဟုပဲသတ်မှတ်သည်။ဟက်ကာဆိုသည်မှာ လွတ်လပ်မှုကိုလိုလားသော အမြဲစဉ်ဆက်မပြတ်နည်းပညာကိုလေ့လာနေသည့်ပညာရှင်တွေဟုသူတို့မသိကြ တချို့က Hacking ကို Crime မှုခင်းလို့ယူဆသည်။ တကယ်တော့ Hacking is notaCrime ဒီထက်ပိုမိုနက်နဲသည့် နည်းပညာရပ်တခုသာဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် တော်တဲ့ အလားလာရှိခဲ့တဲ့ ရှိနေတဲ့ပညာရှင်များစွာရှိနေသည်။
တချို့ကအတော်ခရီးရောက်နေမှရပ်လိုက်ကြသည် တချို့ကလဲ ဆက်လုပ်ပေမယ့် အရာမထင်
ဝမ်းရေးပြသနာကြောင့် လေ့လာမှုတွေ လိုက် ရပ်ကုန်ကြသည်။
သူတို့တတ်ထားသည့်ပညာတွေ ကအရှေ့ရောက်နေပြီး နိုင်ငံ၏နည်းပညာတွေက နောက်ကျကျန်နေခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘယ်ဟက်ကာမှ ငွေ မရ …နေရာမရဖြစ်နေသည်။ ဒီတော့ ဝါသနာထက်ကိုဝမ်းရေးခက်ကြတော့ .. အရင်က ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲမယ့်ဟစ်ကြွေးသူများ တချို့ကစျေး ရောင်း တချို့က အိုင်တီအလုပ်လေးတခုမှာလစာလေး သိန်းဂဏန်းဖြင့်လုပ်ကြရတော့သည်….
ဒါကိုနဂါးနီဟက်ကာအဖွဲ့ကသိသည် သူတို့သည်ငတ်ငတ်သေသေကြေကြေ မြန်မာနိုင်ငံဟက်ကာလောကကြီးအင်အားတောင့်တင်းဖို့ အခြားနိုင်ငံက ဆိုက်ဘာစစ်ပွဲစစ်နွဲလာသော် အဆင်သင့်ထိုးစစ် ခံစစ်ရဖို့အမြဲတစေလေ့ကျင့်နေကြပါသည်။
ဆိုက်ဘာစစ်ပွဲဆိုတာ အခုနေလူကြားထဲ ပြောရင်တော့အရူးလို့အထင်ခံရပါမည် သေနတ်တချက်မဖောက်ရ လက်သည်နိုင်ငံမပေါ် အငွေ့မထွက် လေထုမညစ်ညမ်း ကုလသမ္မဂတောင် မသိလိုက် ပဲ လူများစွာရဲ့ဘဝတွေကို သတ်ပစ်လို့ရသည် ဆင်းရဲတွင်းထဲပို့ပစ်လို့ရသည်။
ဒီမှာ အင်တာနက် ဘဏ်စနစ်တွေ စတော့ရှယ်ရာစနစ်တွေ ကို ပျက်ပြားအောင် ဖုန်းကွန်ယက်တွေ ဆက်သွယ်မှု ကွန်ယက်တွေ စစ် ဘက် ရေးရာကွန်ယက်တွေကို ဟက်ကာတွေအသုံးပြု ပြီးဖျက်ဆီး လို့ ရသည် ပြု ပြင် ပြောင်းလဲ ပစ်လို့ ရသည်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ နေ့စဉ် ဆိုက်ဘာစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေသည်ကို ရံဖန်ရံခါကြားရပါမည်။မြောက်ကိုရီးယား။ရုရှ။တရုတ်ဟက်ကာများသည် အမေရိကန် ကွန်ယက်များသို့တိုက်ခိုက်မှုတွေစဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်နေသည်။အမေရိကန်ကလဲအခြားနိုင်ငံများ၏ကွန်ယက်များအပေါ် Spy လုပ်နေမှုများရှိသည်။
ကျုပ်တို့ရော … နဂါးနီထဲမှာအကြိးဆုံးအကိုကြီး၏စကားအဆုံး ညီငယ်တဦး ကထမေးသည်
အေး ညီလေး တို့အဖွဲ့မှာ ဘဲ ဆယ်ယောက်ပဲ ရှိတယ် အခြားမြန်မာနိုင်ငံက စစ်ဘက်ဆိုင် ရာ ရုရှပြန် စစ်သည်တွေပေါင်းမှ စုစုပေါင်း နှစ်ဆယ်လောက်ပေါ့ ဒီထဲမှာ မှ တကယ် အဆင့်မှီမမှီတွေကရှိသေးတယ် လူကလိုနေ တာ… တကယ်လို့များ အခြားနိုင်ငံကတိုက်ခိုက်စမ်းသပ်မှုလုပ်လာ ရင်တန်ပြန်တိုက်စစ်ဆင်ဖို့လို တယ်။ လူအင် အားလို တာပေါ့ ကွာ ဟက် ကာဖြစ်ဖို့ ကလဲ မလွယ်ဖူး ကြိုး စား အားထုတ်မှု ရှိပြန်တော့လဲ နောက် က နေစားဝတ်နေရေးအတွက်ပံ့ ပိုးပေးမယ့်သူလိုတယ်ဒါမှစိတ်ဖြောင့်ဖြောင့်နဲ့ လေ့လာပြီး ပညာစကေးတွေတတ်လာ မှာ။
ညီငယ်တို့တွေ က ဟက်ကာတွေလေ ဟက်ကာဆိုတာပြစ်မှုကျူးလွန်သူလို့သတ်မှတ်ကြတယ် လူ လုံးထွက်ပြီး သင်တန်းပေးလို့မရဖူး။ ပြီးတော့ ဟက်ကာမှန်းသိတဲ့အခါ ဒီကောင်ဟက်ကာကြီးပဲဆိုပြီး ပညာစမ်းချင်သူ လာ စသူတွေ ကခပ်များများ အပြင်လောကကြီးမှာ ရန်များပါတယ်ညီငယ်။ဖိုရမ်တို့PDF တို့ Video တို့တခုခုလုပ်ပီးတော့ တကယ်သိချင်တတ်ချင်ရင်Training ပေးတာပေါ့။ တကယ်တော့အဲလို သင်ပေးတာလဲ မကောင်းလှဖူး။သူတို့တွေ google ကနေ Self study လုပ်နိုင်ပီးကိုယ့်ဘာသာရလာတဲ့ တန်ဖိုးလေးကိုတန်ဖိုးထားစေချင်တာ။ အကိုတို့သူတို့အားတက်အောင်ပြောပြနိုင်တာလေးတခုကတော့ How to becomeahacker ပေါ့…
တနိုင်ငံလုံးကနည်းပညာသည်လေးတွေကိုလဲ ဟက်ကင်းကိုလေ့လာကြစေချင်တယ်။ ဟက်ကင်းမှာမှ လိုင်းတွေကွဲ သေးတာကို လဲ ပြည်သူလူထုအမြင်မစောင်းအောင်သိစေချင်တယ်။ ဟက်ကာဖြစ်တယ် ဟက်တယ်တယ် ဒါပေမယ့် လုံခြုံ ရေးယိုပေါက်တွေကိုပြင်ဆင်တယ် ဒီလူကိုတော့ white hat hacker ဦးထုပ်ဖြူ ဆောင်းတဲ့သူ။Hacking ကို ဖောက်ဖို့အတွက် သုံးတယ် အဲလူကို ကျတော့ Black hat hacker ဦးထုပ်မဲဆောင်းသူ၊ နောက်ရှိတာက Grey hat hacker ပဲ သူကတော့ ၂မျိုးလုံးကိုလုပ်ချင်ရာလုပ်တဲ့သူပေါ့။
နောက်ပြီး ပိုဆိုးတာက မြန်မာနိုင်ငံကဝက်ဆိုက်တွေ အကုန်တော်တော်များများက ပေါက်နေတာပါဘဲ။ ဝန်ကြီးဌာနဝက်ဆိုက်တွေ ကအစ စီးပွားရေးအသုံးပြုနေတဲ့ဝက်ဆိုက်တွေအဆုံးအကုန် အားနည်နေတာချည်း။ ဒီက ဟက်ကာတွေက Cyber war ဖြစ်လို့အခြားနိုင်ငံ ကို စတိုက်ခိုက်တယ် အခြားနိုင်ငံ ကဆိုက်တွေကလုံခြုံတယ်။ ဒါပေမယ့်မြန်မာတွေရအောင်ဟက်နိုင်ပါတယ် လက်ဦးအောင်လဲ ဆော် နိုင်တယ်။
အဲဟိုကနေပြီး တန်ပြန်ဒီကို တိုက်လာရော ဒီကဆိုက်တွေက ဟက်ကင်းစလေ့လာနေတဲ့ ချာတိတ်တွေတောင်ဟက်လို့ရတယ်။ ဘာကိုမှ Update လုပ်ပြင်ဆင်မထားဖူးဖြစ်သလို ငွေ ရပြီးတာဘဲဆိုတဲ့Developer တွေ ကြောင့် ပေးထားတဲ့ ငွေ နဲ့ တန်အောင် ဆားဗစ်ပြန်မပေးနိုင်တဲ့ Company တွေကြောင့်ဆိုက်တွေအဟက်ခံရပါ လေရော။ ဝန်ကြီးဌာနဝက်ဆိုက်တခုဆိုရင် မြန်မာငွေနဲ့သိန်း ၅၀အနည်းလေးတောင်းတာ သိန်း ၂ဆယ်ဆိုတာအောက်ထစ်
ငွေလဲ ရရော သွားလေရောဟယ်ဆိုပြီး လွတ်ခဲ့ရော။ ဒါကလဲ နည်းပညာအားနည်းတဲ့အာဏာပိုင်တွေရဲ့အမှားလဲပါပါတယ်။ နိုင်ငံနဲ့ချီနေတဲ့ ဝက်ဆိုက်တွေမှာ Web admin ,Developer တွေ 24/7 ခန့်ထားသင့်တာပါပဲ။ အားနေတဲ့ပညာတတ်သူတွေမှ အများကြီး။
တချို့အွန်လိုင်းရှော့ပင်းဆိုက်တွေဆို ဝင်ပြီးစျေးပြင်ပေးခဲ့လို့ရတဲ့အထိကိုပေါက်နေတာပါ ပဲ ။သတင်းဌာနဆိုက်တွေလဲဒီလိုပဲ လေ။သတင်းအတုတင်ပေးပြီး တင်လိုက်ရင်တောင် နောက်ကနေမနည်းလိုက်ရှင်းရလောက်တယ်။ Developer ကလဲ ပညာရှင်ဆန်ဆန် Professional ပီပီသသကိုယ်လုပ်သွားတာကိုကိုယ်သေချာတာဝန်ယူသင့်တာပါဘဲ။ ငွေမရလို့ ဒီငွေနဲ့အခြားနိုင်ငံမှာဆို မရဖူးတို့ဘာတို့ မလုပ်နိုင်ဖူးတို့ဘာတို့ဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာ။ ဒီနိုင်ငံမှာ ငွေ ၅ရာနဲ့ထမင်း ၀၀ စားလို့ရသေးတယ်ဆိုတာ သိရင်သိကောင်းမှာဘဲ။ အခြားသူတို့ပြောတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေမှာတော့ ၀မဝ မသိဖူးပေါ့ဗျာ။ဒီကြားထဲစေတနာနဲ့ Security လိုအပ်နေတယ်ဒါလေးပြင်လိုက်နော်ဆိုတာ ကို ပြန်ရန်တွေ့ဆဲဆိုတဲ့သူတွေလဲ ရှိတယ်။အဲတာနဲ မထူးပါဖူး ကိုယ့်ဘာသာတချို့ဟာတွေဝင်ပြင်ပေးခဲ့တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတာ က ကိုယ်ကတခုခုတတ်ပြိးအဲတာနဲ့လုပ်စားနေတတ်ပြီဆိုရင်အခြားသူတွေကိုကိုယ့် လောက်မတတ်ဖူးပဲထင်သွားကြရော။ကိုယ်ကတတ်နေပြီထင်တော့ ထပ်မလေ့လာဖြစ်ကြတော့ဖူး။ ရောင့်ရဲသွားကြတာပေါ့လေ။ပြီးတော့ ကိုယ့်လောက်မတတ်ဖူးကွာဆိုပြီး ဘယ်သူဆီကမှမမေးမမြန်း မေးလိုက်ရင်ငါအောက်တယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်တွေနဲ့ပေါ့ လေ…
အကိုကြီးကစိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးနှင့် … ပြောသည်။ဒီကလေးတောင် ဟက်လို့ရတဲ့ဆိုက်တွေကိုဟက်ပြီး ဂုဏ်ယူနေကြတဲ့ အခြားနိုင်ငံကဟက်ကာတွေကြောင့်ခေါင်းအမြဲကိုက်ရတယ်။
ညီငယ်က အကိုကြီးတော်ပီ ဒါတွေပြောလဲ ဒေါတွေပါမယ်…
ဒီတော့ကျနော်တို့ တခုလောက်တော့လုပ် ရအောင်ဗျာ မဟက် ရတာလဲ ကြာပြီ
ကျနော်တို့မျက်နှာဖုံးတွေဝတ်မယ် Video တခု လုပ်မယ်ဗျာ How to becomeahacker ဆိုပြီး Video လုပ်မယ် ဟမ် လုပ်ပီး ဘာလဲ You tube ကနေ တင်မှာလား မဟုတ်ဖူး အကို ကြီး ဒီ ဖက်ကင်း ယူကျူ့ကနေမတင်ဖူး ဘယ်သကောင့်သားမှ Bill ကုန်ခံပြီး မနှိပ်ဖူး ဒီတော့မိဘပြည်သူများလဲ နဂါးနီကို အာရုံစိုက်လာအောင် MRTV 8 ကနေလွှင့်မယ် အဲလိုင်းက လူတိုင်းကြည့်နေတဲ့လိုင်းပဲ ။ ဟဲ့ကောင် မင်းဟာကအကြံ ကြီးလိုက်လား Nothing is possible ဘရို Let’s try together အကိုနံ ပတ် ၅ က EC နဲ့ ကျောင်းပီးတာမလား သူ့ကို TV Brocasting တွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီးမေး ကြမယ်လေ ။အေးအဲကောင် EC နဲ့မလုပ်တော့တာကြာပိ ကွ ဘာလို့လဲ ဆို တော့ကျောင်းမှာ Project လုပ်တာ Hacking to Satellite ကိုလုပ်တာ ဘယ် သူမှအဖက်မလုပ်တဲ့ အပြင် ထိုင်ပါဟားလိုက်ကြသေးတယ် သူစိတ်နာသွားတာအဲထဲ က ဗျာ … အတော်ပဲ လေ ကျနော်တို့ဒါဆို TV အသံလွင့်ရုံလောက်ခေါင်းထဲမထည့်တော့ဖူး အကို ၅ ရဲ့Project ကို အကောင်ထည်ဖေါ်ကြမယ် ။အကို ၅ ဆီဖုန်းခေါ်ပြီး ညနေ ချိန်းလိုက်တော့ အကိုနံပတ်၅ ဆီထံကျန်တဲ့ညီအကိုများရောက်လာကြသည် အကို ကျနော်တို့ MRTV-8 လွင့်ပေးတဲ့ Satellite ကိုကျနော်တို့ဟက်ချင်တယ် ..
အင်းရတယ် သိချင်တယ် အကို ၅ … Satellite တွေသူတို့မှာအားနည်းချက်တွေရှိတယ် ဒါတွေကတော့ DOS (ခုခေတ်ခေါ် DDOS -Denial of Service (DoS) Uplink or Downlink Jamming နဲ့တိုက်လို့ရတယ် Orbital Positioning, Transponder spoofing, Direct commanding, Command replay နည်း TCP hijacking နည်း spoofing နည်းတွေနဲ့တိုက်လို့ရတယ်
ခုတိုက်မှာက MRTV-8 သူက ဘယ်ဂြိုလ်တုမှာထိုင်ထားလဲ သိဖို့လိုမယ် ဘယ်လိုကြို သိမှာလဲ အကို ကြီး ? အင်း Satellite tracker ဆိုတဲ့ဆိုက်တွေကနေ လိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ရလား တွေ့တယ်ကိုကြီး . ..
အေးဒါဆို Taicom 69 satellite မှာတင်ထားတာပေ့ါ degree နဲ့မှအရှေ့တောင် ဟုတ်လား
satplaza.com ကနဝင်ကြည့်ကြည့် သက်တမ်းတောင်ကြာနေပြီ Satellite ကြီးအိုနေပီ..
ညီလေး တို့ကြာတယ် ဟိုးကုလားအဟောင်းဆိုင်မှာ အရင်တုန်းက ၆ ပေ ဂပေစလောင်းတွေ အချပ်တွေအဟောင်းစျေးနဲ့ပြန်ဝယ်ခဲ့ မော်တာတွေ မောင်းတွေ ပါရရင်ပိုကောင်းတယ် ချ မယ်
ခဏနေသော် ရပီကိုကြီး အေး အေးဒါဆို ချိန် အဲ satellite ကအဲ ဟို ဘက် နားလေး ဆင်ကြစို့ ..
ခေါင်မိုးပေါ်တက်ပီး လိုအပ်သလို ချိန် ကြသည်။
line အော်တိုရှာနိုင်လား မင်းရဲ့receiver က ထင်တာဘဲ signal status က 40ဘဲ ရှိတယ်သေချာချိန်ဦး…
နေဦး Under ground မှာ ဟို မေယိုး ဟက်ကာတွေ မော်ဒီဖိုင်းလုပ်ထားတဲ့ Linux base reciver ရှိတယ်
– Tuxbox based
– GPL source code
– Cross compilers
– Alternative firmware
အငြး အဲတာ နဲ့ ဆငြ မယြ
အငြး လကတြော့နဲ့Join ဟုတပြီ ခေါလြိုကတြော့ Dream box ကိုURL မှာ
MRTV-8 ကိုဆကသြှား အဲမှာ ခု Live ပှနတောေ တှ့ပီ Info ကို ဝငကြှည့ြ
ဟောဟြောြ frequancy 111223MHZ , orbit 877 , symbol rate 25000 Ksym ,Horizonal
Information တှရပှေီ တခုဒေါငြးလုပခြွ ရမယြ Stream info တှေ သိဖို့
dvbsnoop ­ DVB and MPEG stream analyzer http://dvbsnoop.sourceforge.net
“WireShark for DVB” ဒါတော့တော့ Traffic တှကှညေ့မြယလြေ ဟိဟိ…
ကဲကဲ command တွေစသုံးကြမယ်
[email protected]:~>dvbsnoop -s signal -n 1
dvb snoop ကြီး အသက်သွင်းလိုက်ပါပီ ။ ညေးတို့ရေ ဆင်ဂနယ်တွေကိုရင်သတ်ရှုမောတွေ့ရပီလေ pid scan လေးထပ်ဆွဲ ပါဥိး ကံကောင်းရင်အာဆီယံထဲ က ချယ်နယ်တွေပါ ဝုန်းလို့ရမယ်
အဲမှာ တခုတွေ့တာ က Mac address of the Satellite and ip address wow fucking awesome အဲဒီ Mac address လေး Clone ပြီး အခြားနေရာမှာသုံးလိုက်ရလို့တော့ကား ssh / scp , tun/tap အကုန်စကန်လို့ရလာသည် frq တွေလဲ 3D modeling ပုံဖြင့်ထွက်လာသည်။ ညီတို့ဒါတွေ အန်ကုတ် ဒီကုတ်လုပ်ပေး ပြီး ရင် wireshark နဲ့ frq တွေကို Filter လုပ်ပေး
Decode DVB/Audio within model
–Read Text / EPG
–Pipe datagrams to Wireshark
အကိုက python Script လေးနဲ့ ဖိုင်တခု Satellite ပေါ်လှမ်း upload လုပ်မယ် Ferquency to decode file ပေါ့
dvb net MRTV 8ဆိုတာလေးဆောက်ပေးလိုက်ပီ
အဲ ဖိုင်ကို လှမ်းခေါ် [email protected]:~>dvb net MRTV8 (successfully created)
ipconfig -a လေး လှမ်း ခေါ် ip ကျပီ mac ကျလာပီ အင်း ဟုတ်ပီ သူ ကို up လုပ်ပေး ပြီး ရင် TCP dump လုပ် အင်း root access ယူလို့ရမလားမသိဖူး ညီ ငယ် နံပတ် ၃ ဒီ satellite က Cent OSတင်ထားတယ် root ပေး ခဏ ကြာသော် root ရပီ အကို ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ဝင်ခဲ့တယ်ဆိုရုံပဲ ကောင်းတယ်။ သူများနိုင်ငံ ကသူများ satellite ဆိုတော့ ကျနော်တို့ကကိုယ်ပိုင် satellite မရှိတော့ မကောင်းဖူး တော်ကြာ နိုင်ငံအပေါ်အထောင်းခံရရင်မကောင်းဖူး txt ဖိုင်လေး ရေးပေးခဲ့ Seccurity Hole ကို Fix ပါလို့ပဲ ရေးခဲ့လိုက်။ အခြားသူသာဆို Satellite ကို အခြား လမ်း ကြောင်း ကိုလ ည်ပတ်ခိုင်းလိုက်ရင် ဒုက္ခ..ပြီးတော့ Satellite ပေါ်ကနေ အခြား
Satellite တွေ Ground station တွေ ကို DOS တိုက်တာတို့ Spoofလုပ်တာတို့ Direct command ပေးတာတို့ဆို ဒုက္ခ….
ကျနော်တို့ ကတော့ချယ်နယ်တခုပဲဟက်ကျမှာလေ…ဟားဟား ….
ဟုတ်ပီ ကဲကဲ ဘယ်ချိန်မှာငါတို့ Video လေးလွင့်မလဲ ည ၇နာရီ..လွင့်ဗျာ
whole satellite ကြီးကို နဂါးနီတို့ဝင်လိုက်သော်လဲ ဘာမှမလုပ်ခဲ့
MRTV 8 ချယ်နယ်ထဲတွင်သာ video လေးတခု upload ပေးခဲ့သည်
မိဘပြည်သူများခင်ဗျာ (သမတကြီး ပုံကြီးတက်လာပီး)
We are (အိုဘားမားပုံ့ဖြင့်)
နဂ့ါးနီဖြစ်ပါတယ် .. မျက်နှာဖုံးများဖြင့်
ကျနော်တို့တင်ဆက်မယ့်ရုပ်သံ ကတော့ How to becomeahacker ဖြစ်ပါတယ်…
လူတွေ အံ့ သြကုန်သည် … ဘယ်လိုလုပ်သွားမှန်းဘယ်သူမှမသိကြ
အပိတ်တွင်ကား DJ SODA သီချင်လေး ဖြင့် …
WYTU Therlay (ရေနံ)
Users Viewed This Post: 215
© 2020 Creative Theme by L33t